Falanqeynta Kulanka Tottenham Vs Arsenal Xili Kooxda Tottenham Ay Hogaanka Dooneyso
HomeWararka Ciyaaraha MaantaFalanqeynta Kulanka Tottenham vs Arsenal xili kooxda Tottenham ay hogaanka dooneyso
December 6, 2020 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska 0
Kulanka Ugu xiisaha Badan Premier League Todobaadkan ayaa dhexmari doona kooxaha Arsenal iyo Tottenham kulan ka tirsan todobaadkii 11-aad ee horyaalka premier League.
Kooxda Tottenham ayaa kulanka soo galaysa iyaga oo hogaaminaya horyaalka premier league waliba ka sareeya Arsenal 7 dhibcood ka hor klankooda.
Dhanka kale Arsenal ayaa kulanka soo galaysa iyaga oo wakhti adag ku jira waliba ku dhibaatoonaya qaab ciyaareedka kulamadii ugu dambeeyay.
Tottenham Hotspur ayaan laga badinin lixdii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League ee ay gurigooda kula ciyaareen Arsenal halka Jose Mourinho aan laga badinin dhamaan 10kii kulan ee uu gurigiisa kula ciyaaray Arsenal tartamada oo dhan Kooxihii kala duwanaa ee uu soo maamulay.
Harry Kane ayaa 10 gool ka dhaliyay Arsenal tartamada oo dhan hadii uu gool ka dhaliyo kulankan waxa uu noqon doonaa xiddiga ugu goolasha badan Taariikhda Kulamada Arsenal Vs Tottenham isaga oo dhaafi doona xiddigaha Emmanuel Adebayor iyo Bobby Smith.
Mikel Arteta ayaa guuldaro la kulmay kulankiisii ugu horeeyay ee uu ka hor tagay Tottenham xilli ciyaareedkii hore waxana uu noqon doonaa tababarihii 2-aad ee taariikhda North London Derby laga badiyo labadiisa kulan ee ugu horeeya kadib Bertie Mee xilli ciyaareedkii 1966/67.
Arsenal ayaa kaliya laga badiyay laba kulan oo isku xigta oo Premier League ah oo ay la ciyaareen Spurs, May 1993 iyo November 2010.